JOHN EDWARD TIMELINE
1969 (October 19): John Edward McGee mụrụ na Queens, New York.
1985: Edward natara ọgụgụ isi site na Lydia Clar, bụ onye gwara ya na ezitere ya ịtọ ya n'ụzọ iji mezuo ikike uche ya.
1986: Edward malitere isoro mmụọ nke onye ahụ nwụrụ anwụ na-ekwurịta okwu ka ọ na-arụ ọrụ na "ahịa ọgụgụ isi" mpaghara.
1989: Edward natara ọtụtụ ozi site na nne ya mgbe ọ nwụsịrị.
1990s (mmalite): Edward gbalịsiri ike ịnabatawanye mmụba maka ịgụ ọgụgụ na ọrụ onwe onye dị ka onye nkuzi na onye nkuzi egwu.
1990s (mid): Edward kpebiri itinye uche ọkachamara na ọrụ ya.
1998: Edward bipụtara akwụkwọ mbụ ya, Oge Ikpeazụ.
2000: Edward malitere imepụta na nnabata Na-agafe.
2004: Ịgafe akagbuo.
2006 (Machị): Edward malitere imepụta na nnabata John Edward Cross Mba.
2008 (November): John Edward Cross Mba akagbuo mgbe oge ato gachara.
2011 (October): Edward malitere Ise , mkparịta ụka ntanetị mmekọrịta, site na JohnEdward.net.
2013: Ise ka aha ozo evolve . Edward malitere usoro ntanetị Soro John Edward soro.
John Edward McGee, Jr. mụrụ na October 19, 1969 na mpaghara Queens nke New York City. Naanị otu nwa amụrụ John na Perinda McGee, onye uwe ojii Irish-American na onye odeakwụkwọ America-America, Edward bi n'otu ụlọ dị n'etiti Glen Oaks agbata obi ruo mgbe ndị mụrụ ya kewara mgbe ọ nọ na klas nke isii. Kọrọ sikwuo ike ya na nne ya na ndị ikwu nne ya, John dị afọ iri na otu na nne ya kwagara n'ụlọ nne nne ya na Glen Cove, Long Island. Mgbe nke ahụ gasịrị, ezinụlọ ya buru ibu, Roman Katọlik, -tali-America gbara Edward gburugburu. Nne nne ya, Josephine Esposito, nwere ụmụ iri na otu; wee nwa oge Edward na nne ya malitere ịkekọrịta ụlọ ya, nwanne nna Edward (nwanne nne ya nke ntà) batara n’ime ụlọ ya na di ya na nwa nwoke nwoke a mụrụ ọhụrụ. Ọzọkwa, Edward na-echeta ugboro ugboro site na ndị nwanne nne ya, ụmụ nwanne nna ya, na ụmụ nwanne nne ya, nnọkọ ezinụlọ buru ibu na nri kwa izu ụka ọ bụla, n'agbanyeghị agbanyeghị na ọ bụ naanị otu nwa, ọ nweghị mgbe ọ na-adị otu a n'ihi ọtụtụ ụmụ nwanne nne ya "na-elekọta ya ”(Edward 1998). Edward nwere mmekọrịta chiri anya na nwanne nna ya bụ Joey, onye ọ kọwara dị ka onye nwere onwe ya "'60s," na-ewebata ya n'ihe omume ime mmụọ dịka yoga na ntụgharị uche. Joey na nwunye ya nke abụọ, Debbie, onye na-agụ kaadị tarot, mere ka Edward mata echiche banyere ike ime mmụọ. Ọzọkwa, nne Edward nwere mmasị miri emi na ikike karịrị nke mmadụ, na n'oge ọ bụla ọ dị afọ iri na ụma John, ọ ga-eleta ndị mmụọ na-agụ akwụkwọ mgbe niile ma na-akpọkarị ha n'ụlọ maka nnọkọ buru ibu nke gụnyere ọgụgụ isi na nnọkọ mmụọ. Ọ bụ ezie na ọ nọrọ afọ ntorobịa ya site na nkwenkwe na omume ndị na-enweghị atụ, Edward nwere obi abụọ ikwere n'eziokwu ha, n'agbanyeghị na ọ kọrọ na ọ malitere igosipụta ikike mmụọ n'oge ọ dị obere. Edward chetara igosipụta ikike, dị ka ịkọ amụma nleta nke ndị ezi na ụlọ, inwe ike “ihu” okwu n’isi ya ma sụpịa ha tupu ọ mụta ịgụ na ide ihe, na icheta akụkọ ezinụlọ nke mere tupu amụọ ya. Ọzọkwa, ọ na-echeta mmetụta nke ibi ndụ gara aga, na-echeta ihe ndị mere “tupu [ọ] gbadata ebe a” (Edward 1998; “Who Is Psychic Medium John Edward?” Nd). Agbanyeghị, Edward enweghị ike ịkọwa ihe omume ndị a dị ka ihe nwere ike karịrị ike mmadụ ruo mgbe ọ dị afọ iri na ụma.
Mgbe ọ dị afọ iri na ise, a gwara John na ya na-enwe nsogbu na thyroid na-agbaso nyocha anụ ahụ na-eme. E zigara ya na endocrinologist nke chọpụtara ihe yiri ka ọ bụ etuto na gland. Ọ bụ ezie na nyocha ndị ọzọ gosipụtara na etuto ahụ adịghị, ahụmịhe ahụ ga-egosipụta ihe pụtara ìhè na ndụ Edward ka ọ mere ka ọ kpọtụrụ onye na-ahụ maka mmụọ Lydia Clar. Mgbe nne John natara akụkọ banyere ọrịa nwa ya nwere ike ịrịa, ọ rịọrọ enyemaka nke Clar, bụ onye ọ gụrụ na-agụ ya nke ọma. Nne Edward kpọrọ Clar ka ọ bịa n'ụlọ ha ka ha gụpụta ndị ezinụlọ ya, gụnyere John n'onwe ya. Otu onye nwere obi abụọ n'oge ahụ, a kọrọ na John banyere n'ọgụ nke ya n'ebumnuche nke igosipụta izi ezi ya. Otú ọ dị, ka Clar malitere ikpughe ihe omume site n'oge gara aga John tinyere echiche na mmetụta uche ọ na-ebu, ọ malitere ịjụ nkwenye nke ya karịa ikike Clar. Onye mmụọ ahụ kọwaara Edward na o nwere onyinye ime mmụọ nakwa na e zigara ya ịtọ ya n'ụzọ iji mezuo ikike uche ya. Mgbe o nwesịrị Lydia Clar, Edward nwetara oge ịchọpụta onwe ya nke ọ chọrọ ịghọta ikike ya na otu esi etinye ya. Njem ya dugara ya na Sandi Anastasi, onye na aru oru Astrological Institute of Integrated Studies, otu ulo akwukwo muta aka imeziwanye ikike di omimi. N'okpuru nkuzi Anastasi, Edward zụlitere ikike ọgụgụ isi ya wee bụrụ aka ochie n'ihe gbasara numerology na tarot (“Astrological Institute,” nd).
Edward malitere iduzi ọgụgụ akwụkwọ na ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya n'oge na-adịghị anya ọ sonye na "ngosi mmụọ" mpaghara. Ọ ka nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na nke ọdụdụ nwa mmụọ, ọ gara ihe omume ndị a na Sọnde ọ bụla maka afọ na-esote. Agbanyeghi na mbu ebughi n'uche ime oru nke ikike ya, ndu ya gha ewegharia ozo mgbe ubochi uka, n’etiti igu akwukwo, ezutere ya ihe o kowara dika ume ohuru. Ruo oge ahụ, ọgụgụ Edward buru amụma ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu, dịka mgbanwe na ọrụ ma ọ bụ mmekọrịta; n’agbanyeghi, ike ohuru a wetere ihe mmetuta o choro ka ichapu ya site na redio abuo di iche n’otu oge. Ọ malitere ịhụ aha, bụ nke ọ gụụrụ nwanyị ahụ ọ na-agụrụ ihe. Ọ gwara ya na ha niile bụ aha ndị ikwu ha na-anaghị ebizi, mana ndị nọrọ ya nso na ndụ. Edward bu ụzọ kọwaa ahụmịhe a dị ka ngosipụta dị iche nke otu ikike ahụ; ọkachasị, n'ihi na onye ahụ nwụrụ anwụ rụrụ ọrụ dị mkpa na ndụ nwanyị ahụ, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ha ga-apụta na ịgụ ya. Agbanyeghị, ka ọhụụ ndị a na-adịwanye ma nụchaa, Edward kpebisiri ike ịghọta ha wee bido nyocha banyere mkparịta ụka na mmụọ. Nchoputa ya dubara ya na onye ozo aha ya bu Shelley Peck, onye nyeere ya aka ighota ikike ya. Ọbụna dịka nkwukọrịta ndị a siri ike ma karịa ike mmụọ ya, Edward echeghị na ya bụ onye na-ajụ onwe ya ruo mgbe nne ya nwụrụ site na kansa mgbe ọ dị afọ iri na itoolu. Mgbe ọ nwụsịrị, Edward natara ọtụtụ ozi site na nne ya, n'otu n'otu na site na Shelley Peck, onye ọ bịaruru nso. Nkwukọrịta a nwere nnukwu mmetụta etu Edward siri kọwaa ikike ya. Ọ malitere ịgba ụgwọ onwe ya dị ka onye na-ajụ ase na ngosipụta uche na ijide nnọkọ ọgụgụ nzuzo, na-achọ inyere ndị ezinụlọ na ndị enyi ndị ọzọ na-eru uju aka ka ha na ndị ha hụrụ n'anya na-emekọrịta ihe dịka o nwere ike ịme.
Edward malitere ịdọrọ uche dị ukwuu dị ka onye na-ajụ ihe n'oge niile 1990, na-anabata oku site na ndị ahịa na ụlọ ọrụ redio dị na United States na-arịọ maka oge ịgụ ihe na ajụjụ ọnụ. N'oge a Edward rụkwara ọrụ dị ka phlebotomist n'otu ụlọ ọgwụ dị na mpaghara ebe ọ na-enweta akara ugo mmụta na Nlekọta Ahụike na Mahadum Long Island. Na 1992, ọ malitere ịga klaasị na ebe a na-egwu egwu dị nso ebe ọ ga - ezute nwunye ya Sandra n'ọdịnihu. Ka ọ na-erule oge ha lụrụ na 1995, Edward amalitela ịkụzi ihe ọmụmụ na ịgba egwu egwu (Edward 2003; Gliatto 2002). Ọ tụgharịrị uche n'oge a, na-echeta mmetụta dị ka a ga - asị na ọ na - eduga ndụ abụọ dị iche: ndụ "nkịtị" na nke e ji mara ọrụ ya (Edward 1998). Agbanyeghị, ka ọ gbalịsiri ike ịnabata ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke arịrịọ maka ịgụ na mgbasa ozi, Edward mere mgbanwe ọrụ ikpeazụ ya, na-ekpebi itinye uche ya dum n'ọrụ ya dị ka onye na-ajụ ase.
Akwụkwọ mbụ Edward, bụ autobiography nke akpọrọ Oge Ikpeazụ , bụ nke e bipụtara na mbido 1998 ma dọta uche nke mgbasa ozi ozugbo. Ọ pụtara na Larry King Live n'October nke otu afọ ahụ na ọtụtụ ihe omume redio na-egosi. Na 2000, Edward malitere imepụta na ịnabata ihe ngosi onyonyo nke ya, Ịgafe , nke malitere site na 2004 na Sci Fi network. Ihe omume a gosipụtara Edward na-eme ọgụgụ isi dị ka ihe na-enweghị isi na ndị na-ege ihe nkiri banyere ihe dị ka mmadụ 200. Mgbe emechara ngosi ahụ, Edward gara n'ihu na-egosi mgbasa ozi, akwụkwọ ndị edemede banyere ahụmịhe ya dị ka onye na-ajụ ase, ma na-eduzi usoro ọgụgụ nke onwe, nke chịkọtara oge ichere ọtụtụ afọ. Na Machị nke 2006, Edward bidoro ịnwe mmemme nke televishọn nke abụọ, John Edward Cross Mba , nke malitere na WE tv network ruo na Nọvemba nke afọ 2008. A haziri mmemme ahụ n’ụzọ yiri nke a Ịgafe ; Otú ọ dị, ọ gosipụtara Edward na-elegharị anya ma na-agba ndị ahịa ajụjụ ọnụ mgbe ha gụsịrị akwụkwọ iji chọpụta otú nnọkọ ahụ si metụta ha n'ụzọ ime mmụọ (Logan 2006).
Edward bi na Long Island ya na nwunye ya na ụmụ ya abụọ, Justin na Olivia. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, o jikọtara ọnụ ọgụgụ mmadụ dị ukwuu site na njem nlegharị anya nke mba dị iche iche, nke kwụsịtụrụ na Canada, England, Australia, na South Africa. Ọ na-aga n'ihu na-ede ma na-ebipụta akwụkwọ, gụnyere akwụkwọ akụkọ ifo akpọrọ Nna-ukwu dara , nke e bipụtara na 2012. O meela mgbasa ozi ugboro ugboro na ngosi okwu dịka Dr. Phil, Taa Gosi, na Oge Akaraka.
Ọ bụ ezie na a zụlitere John Edward na ọdịnala Roman Katọlik, a kọrọ na ọ malitere ịgbagha okpukpe ya site na mmalite afọ. Kemgbe ọ bụ nwata, ọ na-aga uka kwa izu ma gbaa ya ume isonye na mmemme ụka; otu o sila dị, ọ na-echeta iji echiche obi abụọ na-abịaru okpukpe nso, na-eme nchọpụta onwe onye na ọdịnala okpukpe na-abụghị nke ya. Uche nke nkewa di, ka ihe ike Edward siri mee ka o nwekwuo ike. Dika ikike ya bidoro rụọ ọrụ buru ibu na ndụ ya ma malite ịkọwa ha n'echiche paranormal, ọ dị ya ka ọ dịpụrụ adịpụ n'okwukwe nke nwata ya nke na-ajụ paranormal. Ọ bụ ezie na Edward ekewapụghị onwe ya kpamkpam n'okwukwe Katọlik ma na-aga n'ihu ịkọwa onwe ya dị ka onye Katọlik, nkwenkwe okpukpe ya ndị a na-akụzi si n'okpukpe Katọlik na Iso Christianityzọ Kraịst n'ọtụtụ ụzọ dị mkpa, nke bụ na ọ naghị ele Jizọs Kraịst anya dị ka nwa Chineke ( Edward 2001). Ọ bụ ezie na ọ na-egosi ịdị adị nke Chineke, ọ na-ele Chineke anya dị ka onye na-abụghị onye. Ahụmahụ Edward nwere na ike karịrị ike mmadụ dugara ya iwere echiche dị iche iche banyere okpukpe, na-atụle ọdịnala okpukpe dị iche iche ka ha bụrụ ụzọ dị iche iche na otu eziokwu kachasị. Ya mere, mgbe ọ na-atụle Jizọs dị ka onye amụma, ọ na-ekwupụta Kraịst ka ọ bụrụ "'otu n'ime ọtụtụ'" (Kwuru site na Hallowell 2013).
Ọzọkwa, Edward etinyela echiche okpukperechi nke Ọwụwa Anyanwụ na nke ndị America na usoro nkwenkwe ya. Edward malitere ịkọwa okwukwe na ịlọ ụwa ọzọ dị ka nwatakịrị, na-ekwu na ọ bụghị nanị na ọ dịrị ndụ ọtụtụ ndụ, mana ka ọ nwee ncheta na ihe ọmụma banyere ndụ ya gara aga. Tụkwasị na nke ahụ, Edward kwupụtara nkwenye na Nduzi Mmụọ, ma ọ bụ ndị ime mmụọ mepụtara, nke ọ na-azọrọ na ọ na-ekere òkè dị ukwuu n'ihe ime mmụọ na uto n'oge ndụ ya. Dị ka Edward si kwuo, ọ bụ ezie na ọ maara banyere ọnụnọ nke ndị ndu a kemgbe ọ bụ nwata, ọ tụgharịrị ịkọwa njirimara ha ruo mgbe ọ dị afọ iri na isii mgbe ọ gbanwere ndụ ndụ gara aga n'okpuru nduzi nke Shelley Peck. O doro anya na ndọghachi azụ ahụ gara n'ụzọ a na-atụghị anya ya, nduzi mmụọ Edward wee pụta ìhè nye ya. Ọ na-azọrọ na ọ nwere ngụkọta nduzi isii: nduzi "oge niile", gụnyere ndị ntorobịa na ndị mọnk, yana "onye ndu ndu," nke pụtara n'ihu Edward dị ka Onye Nwe Ala America. Onye ndu nduzi, dika Edward kọwara, ekenyela ya na ọmụmụ mmadụ ka ọ na-eso mmadụ n'oge ndụ ya niile ruo mgbe ọ gafere n'ime mmụọ. alaeze (Edward 1998). Dị ka Edward si kwuo, onye ọ bụla nwere nduzi mmụọ ma nwee ike iso ha kwurịta okwu; agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ ga-ebu ụzọ nweta ọzụzụ ka ha wee nwee ike ịmata ihe ọnụnọ ha ma nwee ike ịghọta ozi ha.
N'otu aka ahụ, Edward, n'adịghị ka ọtụtụ ndị na-ajụ mmụọ na ndị mmụọ, anaghị ele ikike ya ịbụ onyinye pụrụ iche. Kama nke ahụ, Edward na-ekwusi ike, na omume onye ọ bụla e nyere nwere ikike iso ndị mmụọ kwurịta okwu (Hodges na Ulsperger 2005). Dị ka Edward si kwuo, nkwurịta okwu na mmụọ na-adabere n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ịgbanwere ike ike. Ndi mmadu nile nwere atom na molekul, na isi ihe di iche n’etiti mo ndi di n’ime aru na ndi “gabigara” di na ngwangwa nke ihe ndia. N’ịbụ nke dị n’ime ahụ, ike mmadụ na-eme nwayọ nwayọ karịa ka ọ na-eme ma ọ hapụ mgbe ọ hapụchara ahụ. Iji kpọtụrụ ebe ime mmụọ, mmụọ na onye na-ajụ mmụọ ga-enwerịrị mgbanwe na ogo ike. Edward ejiriwo usoro a tụnyere akụkụ nke helikopta. Mmụọ ndị dị na mpụga ahụ na-eme njem dị ka ọnya na-agba ọsọ ọsọ, ngwa ngwa nke mere na onye ọ bụla enweghị ike ịhụ anya ma tupu enwee nkwukọrịta, ha ga-akwụsịlata nke ukwuu. N'otu aka ahụ, onye na-ajụ mmụọ ga-enwerịrị ike ike ya iji "dozie oghere" dị n'etiti mpaghara anụ ahụ na nke mmụọ (Edward 1998). Ọ bụ ezie na ikike a abụghị naanị ụfọdụ ole na ole, Edward na-ekwu na esemokwu dị na ọkwa mmadụ n'otu n'otu dị. Dị nnọọ ka ụfọdụ ndị nwere ike ime egwuregwu, agụmakwụkwọ, ma ọ bụ nka, ndị ọzọ amakarịchaa ịgbanwe ike ha ma si otú a nwee ike iso mmụọ kwurịta okwu. Edward ejiri echiche a kọwaa otú o si nwee ike ịmata ikike nke onwe ya na nwata. Ọ bụ ezie na Edward ekwuola ọtụtụ ikike iji soro ndị mmụọ na-ekwurịta okwu na mbọ mmadụ ọ bụla, ọ na-akọwa Chineke dị ka isi mmalite nke ikike niile na-adịghị mma (Walker, 2003).
Edward akọwapụtala usoro nke ịjụ ase, na-ekwusi ike na onye na-ajụ mmụọ bụ naanị onye ozi dị n'etiti mmụọ na onye mmụọ ahụ na-anwa isoro. Site n'ọdịdị nke ikike ya, Edward na-ekwusi ike na ịdị adị nke ndụ mgbe a nwụsịrị. Agbanyeghị, ọ hụla ọdịiche dị n'etiti ịnata ozi site na iji aka ya gafere mpaghara ime mmụọ. Dị ka Edward si kwuo, ikike ya ekweghị ya ka ọ hụ onwe ya mgbe ọ nwụsịrị; ya mere, ebe a na-ajụkarị ya ka ọ kọwaa ya, ihe ọmụma ya metụtara nanị mmụọ ndị agwalarị ya. Edward na-ekwu na mgbe mmadụ nwụrụ, mmụọ na-ahapụ ahụ ya wee nọrọ n'ọnọdụ nke ike dị ọcha. Dị ka Edward si kwuo, ịgafe gụnyere ịbanye ọnọdụ ime mmụọ a ma dịrị na ntụgharị dị iche karịa nke eluigwe na ala nkịtị. Ọzọkwa, mpaghara ime mmụọ dị iche iche dị iche iche; nke ọkwa otu mmụọ na-abanye ozugbo ọ gafere gafere dabere na ahụmịhe ụwa na uto ime mmụọ.
Edward na-ekwu na ozugbo mmụọ gafere, ha enweghịzi ike ịkọrọ dị ka ha mere n'ime ụwa ha; kama, ha na-ezi ozi n'ụzọ ihe atụ. Ọzọkwa, mmụọ anaghịzi enwe mmetụta dị ka anyị ghọtara ha, kama ọ bụ ahụmịhe na ọkwa ụwa niile. Ọ bụ ezie na Edward na-ekwusi ike na mmụọ na-anọgide na-arụ ọrụ nke ukwuu na ndụ ndị a hụrụ n'anya ka nọ na mpaghara nkịtị yana na ha nwere ike inye nduzi, ha anaghị edo onwe ha n'okpuru mgbanwe ngwa ngwa nke mmetụta na-adabere n'ọnọdụ nke ndị ụwa nwere. Kama, dị ka Edward si kwuo, "ọ na-ele foto ka ukwuu karịa na ngwakọta" (Edward 1998). N'ikpeazụ, Edward agbaghaala ihe ọ na-ewere dị ka echiche Hollywood-kere na mmụọ na-enwekarị mgbagwoju anya na nsogbu na-agabiga n'ógbè ime mmụọ, na-ekwusi ike na, n'ụzọ megidere nke a, ọ na-adịkarị obere.
Tupu ị kpọtụrụ ala ime mmụọ, Edward ga-ebu ụzọ bulie ike ya, nke ọ na-azọrọ na enwetara site na ya ntụgharị uche na ekpere na rosary. Dị ka Edward si kwuo, ememe a na-enye ya ohere izute ndị mmụọ n'otu oghere n'etiti anụ ahụ na nke ime mmụọ ozugbo ha, n'aka nke ha, belatara ike nke aka ha. Edward ejiriwo ahụmịhe nke izizi kọntaktị na ikiri foto na-etolite: ebe onyonyo ahụ bidoro nke ọma, ka ọgụgụ na-aga n'ihu, a na-ahụkwu iberibe ruo mgbe egosipụtara foto zuru ezu. Ọgụgụ Edward na-agakọkarị na ihe atụ a, na-amalitekarị n'ụzọ doro anya, na aha ma ọ bụ naanị leta, wee bụrụ nke akọwapụtara nke ọma. Dị ka Edward si kwuo, ndị mmụọ na-ekwukarị okwu n'ụzọ ihe atụ, site na ọtụtụ ihe oyiyi ma ọ bụ site n'ịgwa ya okwu, nke ọ ga-anwa ịkọwa n'ụzọ ziri ezi. Ya mere, kama ịnara ụda mkparịta ụka, ọgụgụ dị iche iche gụnyere Edward na-ajụ onye ahịa, ma ọ bụ oche, ọtụtụ ajụjụ banyere usoro ihe oyiyi ma ọ bụ echiche ọ na-anata ma na-arịọ maka nkwado. Ọ bụrụ na oche ahụ aghọtaghị ozi Edward na-anwa izi, ọ ga-anwa ịkọwagharị ihe onyogho ndị ahụ egosiri ya ma ọ bụ gaa na ozi ọzọ. N'oge niile a na-agụ akwụkwọ ahụ, mmụọ ndị ahụ na-achịkwa nkwukọrịta ma laa azụ mgbe ezigara ha ozi. Tupu ịhapụ, ndị sprits na-ahapụkarị onye na-achọ ịkpọtụrụ ya na ozi mmesi obi ike, na-ekwupụta na ya agabigala nke ọma ma ka nọ na ndụ ndị ọ hụrụ n'anya (Edward 1998; Pierleoni 2014).
Edward weputara otu ntuziaka, ntuziaka, na iwu maka ịbịa ihe omume ya na ịgụ akwụkwọ ya, bụ nke a na-ejikwa na eserese nke mmemme telivishọn ya. Ọ bụ ezie na ndị na-aga nnọkọ otu, seminar, na ihe nkiri eserese abụghị ndị Edward gụrụ, ọ na-ekwu na site na ịga otu n'ime ihe omume ndị a, mmadụ niile ga-agụ ya. Ya mere, ọ bụrụ na onye bịara ya echee na ọ nwere ike ọ gaghị akwadebe mmetụta uche maka ọgụgụ, ahụmịhe ahụ ga-eme ka ọ ghara iru ala, ma ọ bụ na enweghị mmasị, Edward rịọrọ ka ọ zere ịga. Ọzọkwa, ọ na-arịọ ndị niile na-ege ntị ka ha mara nke ọma na osisi ezinụlọ ha tupu ha agaa nnọkọ ahụ iji hụ na ọgụgụ kacha mma ma baa uru. Ọ bụ ezie na anaghị anabata ngwaọrụ ọdịyo na vidiyo n'ihe omume ọ bụla nke Edward, ọ na-atụ aro ka ndị bịaranụ weta mkpịsị odee na akwụkwọ iji dekọọ ozi. Dị ka Edward si kwuo, ọ bụ ezie na ọ bụghị ozi niile dị ka ihe dị mkpa na mbido, mgbe oge ma ọ bụ ntụgharị uche gasịrị, ha na-adịkarị mkpa.
N'agbanyeghị usoro nkwukọrịta dị iche, Edward na-ahazi usoro ọgụgụ ihe n'ọtụtụ ụdị dị iche iche, gụnyere nnọkọ nkeonwe, nnọkọ otu nzuzo, na obere nnọkọ chiri anya chiri anya. Oge nkeonwe na-ewere ọnọdụ ma ọ bụ na ekwentị ma ọ bụ na mmadụ, na-eme nke ikpeazụ na ụlọ ọrụ nzuzo nke Edwards nwere na Long Island. Ego nke $ 850 ga-anabata otu onye na nnọkọ nzuzo, ma nwee ike ịnabata mmadụ atọ ọzọ maka ụgwọ ọzọ nke $ 100 kwa mmadụ. Edward chọrọ ka mmadụ niile na-aga nnọkọ nzuzo ga-ejikọ ma ọ bụ na nke ndụ ma ọ bụ na-achọ ka ha na ndị ezinụlọ nwụrụ anwụ nke otu ezinụlọ na-ekwurịta okwu ("Ọgụgụ nkeonwe" nd). Oge nke otu dị iche iche nwere ihe dị ka mmadụ iri na ise. Feegwọ nke $ 650 kwetara na otu onye na-agụ obere ìgwè ndị a, nke na-ewe ihe dị ka awa abụọ, ọ bụ ezie na Edward na-ekwu na nnọkọ ahụ nwere ike ịdị ogologo oge dabere na nkwukọrịta sitere na mmụọ a kpọtụrụ ("Otu Ndị Otu Ọgụgụ" nd). Otu ọgụgụ buru ibu karị, nke a na-enwekarị na ụlọ nzukọ nke ebe nzukọ na nke nwere ihe karịrị otu narị ndị nnọchi anya, dịkwa maka ụgwọ nke $ 350 kwa onye. Oge ndị a, nke Edward kpọrọ "Obere, Mkparịta ụka Na-akpachi Anya," na-agbakwa ihe dị ka elekere abụọ n'ogologo ma gụnye obere ajụjụ na azịza tupu ọgụgụ ("Obere, Inttù Na-akpachi Anya" nd). Iji hazie otu n'ime usoro ọgụgụ ihe a na Edward, onye ahịa nwere mmasị ga-ebu ụzọ denye aha na akwụkwọ akụkọ ntanetị kwa izu na Edward site na weebụsaịtị ya (johnedward.net). Ọtụtụ igbe mmasị dị na mpempe akwụkwọ arịrịọ, gụnyere ndị nke nzuzo, otu nzuzo, na obere, nnọkọ otu mmekọrịta. Ozugbo onye ahịa ahụ enyochachara otu ma ọ bụ karịa igbe ndị a, a ga-etinye ya na listi nchere ma kpọtụrụ ya na enweghị usoro iji hazie oge. Dị ka Edward si kwuo, n'ihi nnukwu ọchịchọ maka nnọkọ ndị a na obere oge iji duzie ha, a kpọtụrụ ụfọdụ ndị ahịa n'ime awa ole na ole mgbe ha nyefere arịrịọ na ndị ọzọ na-anọ na-eche ruo afọ abụọ ("Akwụkwọ Ozi Si John" nd) .
Na mgbakwunye na nnọkọ ọgụgụ ndị a onwe ha, Edward na-enwe nzukọ ọmụmụ ihe na ọgụgụ otu nnukwu ndị ọzọ enwere ike ịnweta ọha ma ghara inye gị nkwa ịgụ onye ọ bụla na-ege ntị. A na-enwe nzukọ ọmụmụ ihe na otu ịgụ na nnukwu ámá egwuregwu na ụlọ mgbakọ na obodo ndị dị gburugburu ụwa ma na-anabata ndị 700 na ndị 1,000, n'otu n'otu. Ntinye ego na ihe omume ndị a dịgasị iche dabere na ọnọdụ na mkpa, sitere na $ 39 ruo $ 150. Ngụkọta otu na nzukọ ọmụmụ ihe na-agbakarị awa abụọ n'ogologo ma nwee mpaghara ajụjụ na azịza na mbido, na-esote ọgụgụ. Ọzọkwa, Edward na-enye oge ụfọdụ ihe ọ kpọrọ "VIP Events," nke bụ ọgụgụ otu ndị ejiri ọnụ ọgụgụ ndị bịara 250. Azụmaahịa tiketi $ 300 nyere ohere ịbanye n'ihe omume elekere atọ nke nwere mkpirikpi iwebata na nkọwa nke ikike Edward, na-esochi ajụjụ na azịza, oge ọgụgụ ogologo na, mgbe ajụjụ na azịza nke abụọ gasịrị, obere “zute na kelee ”nzukọ nke ndị bịara ya nwere ike ịkparịta ụka na ibe ha ma were foto ha were Edward (" VIP Events "nd). Zụta tiketi gụnyekwara otu onye otu afọ na nzukọ mmekọrịta mmekọrịta nke Edward, evolve.
Ọ bụ ezie na mmemme telivishọn nke Edward, Ịgafe na John Edward Cross Mba , anọkwaghị na mmepụta, ebe ọ bụ na kagbuo na 2004 na 2008, n'otu n'otu, ha dọtara nnukwu onye ofufe na afọ niile ha kesara. Emere ihe omume ahụ na studio na Queens, New York n'ihu ihe nkiri 200. Tupu ihe nkiri ahụ, a gwara ndị bịara ka ha nọrọ n’ụlọ na-eche ma nyochaa akwụkwọ nnabata ogologo oge, nke a na-akọ na ya gụnyere nkebi ahịrịokwu na-akwadoghị ịkpọtụrụ Edward ma ọ bụ ndị ọrụ ya tupu oge ngosi ahụ. Mgbe anakọtara mpempe akwụkwọ ntọhapụ, a kpọrọ ndị na-ege ntị ka ha banye na studio, ebe e kewara ha n'etiti ngalaba atọ nke ihe dị ka oche iri asaa. Edward ga - amalite usoro ọgụgụ n'ime usoro ihe omume ahụ site na ịgwa otu akụkụ nke ndị na - ege ntị ntị, na-ekwu na mmụọ na-abịa site n'ịchọ isoro onye ọ bụla kwurịtara okwu ahụ. Mgbe ahụ, ọ ga-enye aha ma ọ bụ mpempe akwụkwọ na-enweghị isi nke ịchọta ihe ọmụma iji belata ndị nwere ike ịbịa. Edward ga-ekwupụta ozi kapịrị ọnụ ruo mgbe a mata otu onye, ​​emesịa ọ ga-aga n'ihu na-agụ ya n'otu ụdị ejiji ọ na-agụ akwụkwọ nkeonwe. Ọ ga-eji nwayọọ nwayọọ na-ezipụ ozi ahaziri iche, na-arịọ naanị nkwado site n'aka onye na-ege ntị ka a na-agụ. Mgbe mmụọ nsọ laghachisịrị, Edward ga-emegharị usoro ahụ n'ime usoro ihe omume ahụ fọdụrụnụ (Underdown 2003; Nickell 2001).
John Edward serendipitously malitere ọrụ ya na paranormal dị ka onye na-eto eto n'etiti 1980s, na-agụ kaadị tarot na ndị otu ezinụlọ na ndị enyi ya ma na-etinye ngwụsị izu ya na-arụ ọrụ dị ka onye mmụọ na mpaghara "ngosi" dị elu. Dị ka Edward si kwuo, mgbe ọ dị afọ iri na isii ma na-agụ ihe n'otu ihe omume dị otú ahụ, ọ malitere site na mkparịta ụka site na mmụọ nke onye ahụ nwụrụ anwụ. Edward gbalịsiri ike ịghọta ikike ya ruo ọtụtụ afọ na-esote ma ghara ịtụle onwe ya dị ka onye na-ajụ ase ruo mgbe nne ya nwụsịrị mgbe ọ dị afọ iri na itoolu. Edward malitere na-agụ akwụkwọ site n'otu ọnụ ụlọ dị na nne nne ya, na-adọta nlebara anya dị ka onye na-ajụ ase. N’oge na-adịghị anya ọ natara oku sitere na mba ahụ site n’aka ndị ahịa nwere mmasị na-achọ ọgụgụ na ọdụ redio na-akpọ ya ka ọ pụta dị ka ọbịa. Edward kpebiri ịtụgharị uche ọkachamara ya dum na ọrụ ya n'etiti 1990s, na-esochi ọtụtụ afọ nke mgba iji mejupụta ọtụtụ arịrịọ maka ọgụgụ ọgụgụ nkeonwe. Na 1998, ọnọdụ onye ama ama ama toro too nke ukwuu mgbe e bipụtara akwụkwọ mbụ ya, Oge Ikpeazụ. Edere akwukwo a ngwa ngwa na ebe New York Times ndepụta kachasị ere ahịa ma tinye Edward usoro nke telivishọn na ngosi-okwu dịka Larry King Live na Oge Akaraka . N'ihe na-erughị afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, Edward malitere imepụta na ịnabata usoro ihe omume telivishọn a maara nke ọma Ịgafe. Na elu ya, Ịgafe bụ usoro kachasị elu na Sci Fi Channel . Agbanyeghị, site na ihe ịga nke ọma nke ihe ngosi telivishọn ya, Edward chọtara onwe ya obere oge iji mejupụta arịrịọ ọgụgụ nkeonwe. Ọ chịkọtara oge ichere ihe karịrị afọ asatọ, nke ọ nwere ike idozi naanị mgbe o gosipụtara nkagbu na 2004 ("Akwụkwọ Ozi Si na John," nd; "Banyere John," nd; Edward 1998). N'ime afọ ole na ole sochirinụ, Edward duziri ọgụgụ isi, pụtara na telivishọn na okwu redio, wee bipụta akwụkwọ abụọ ọzọ, tupu ịwepụta mmemme telivishọn nke abụọ, John Edward Cross Mba na 2006. Usoro ihe omume ahụ wepụtara na netwọọdụ anyị na TV maka oge atọ tupu akagbuo ya na 2008. Ọ bụ ezie na ngosipụta nke mmemme ya abụọ na-aga n'ihu na-egosi na ọwa telivishọn dị iche iche, anaghịkwa enwe ntụpọ oge niile na ikuku (Logan 2006; "Ajuju Ajuju," nd).
N'ọnwa Ọktọba nke 2011, Edward malitere usoro mmekọrịta na ntanetị nke akpọrọ Ise site na ebe nrụọrụ weebụ ya (johnedward.net). Ego kwa afọ nke $ 75 na-enye ndị otu ohere ịbanye na "obodo naanị na ịntanetị" nke ha nwere ike ịgwa ibe ha na ndị ọrụ John Edward ozi ("Akwụkwọ Ozi Si John," nd). Ọzọkwa, kwa ọnwa, a na-ahọpụta mmadụ ise n’enweghị nsogbu iji nata ndị nkeonwe ọgụgụ, ise ọzọ na-enweta ohere ịjụ Edward ajụjụ n'onwe ya, a na-enyekwa ndị otu niile ohere ịza ajụjụ na azịza nzuzo na-eso nzukọ ọmụmụ ihe na ihe omume Edward. Na 2013, Edward degharịrị nnọkọ ahụ evolve , n’out oge webata usoro webiti akpọrọ Soro John Edward soro. Edere ihe omume a site na ụlọ ihe nkiri nke Edward site n'enyemaka nke onye na-emepụta telivishọn na onye nduzi Paul Shavelson ma na-agbasa kwa izu site na ntanetị n'ịntanetị Edward. Dị ka Edward si kwuo, ebumnuche ya n'ịmepụta evolve bụ iji nye ndị otu ya ahụmịhe mmekọrịta. A na-akpọ ha òkù ka ha gaa ihe nkiri nke ihe ntanetị, na-akpọ oge ụfọdụ maka ịgụ ọgụgụ ekwentị nke na-egosi na ihe ngosi ahụ, ma nye ha ohere ịjụ ajụjụ ọnụ na ihe ndị na-abụghị ndị na-abụghị ndị ụka ("Gịnị Na-eme?" Nd). Ajụjụ Edward n'ọtụtụ oge ma ọ na-ezube ịlaghachi na mgbasa ozi telivishọn; agbanyeghị, o gosipụtawo mmasị maka usoro nhazi nke ugbu a site na evolve . Kpọmkwem, o kwupụtala afọ ojuju na "mmetụta nke obodo" ọ kwenyere na nzukọ ya mepụtara maka mmemme mmemme onyonyo nke oge gara aga (Nke Holzer kwuru, 2013). Ewezuga obodo ya n'ịntanetị, Edward na-aga n'ihu na-enweta ndị Fans site na akwụkwọ ya, na-ekwu okwu njegharị, nzukọ ọmụmụ na ihe omume, na mgbasa ozi.
John Edward ezutewo nkatọ na esemokwu n'oge niile nke ọrụ ya, ihe ka ọtụtụ n'ime ha gbadara na nkwupụta megide ikike nke ikike ya. Ndị nkatọ boro Edward ebubo iji usoro ọgụgụ ihe “na-ekpo ọkụ” na nke “oyi” eme ihe. Nke mbu bu ichikota ihe omuma banyere ndi ahia tupu ogugu. Esemokwu ọgụgụ isi siri ike mere mgbe Edward pụtara na mmemme telivishọn Oge Akaraka . N'ime oge mmemme a, Edward duziri ọtụtụ ndị gụrụ akwụkwọ na ndị na-ege ntị, o doro anya na ọ wụrụ akpata oyi mgbe mmụọ onye ya na ya na-ekwurịta okwu duziri ya gaa otu n'ime ndị na-ese foto na set. Agbanyeghị, mgbe ị nyochachara ihe nkiri ahụ site na ihe nkiri ahụ, Joe Nickell, bụ onye nyocha nke paranormal metụtara na Kọmitii maka Nyocha Oche, kwuru Oge Akaraka onye na-ede akụkọ John Hockenberry, ohere ọ nwere na Edward sooro onye igwefoto ahụ nwee mmekọrịta tupu eserese ahụ. N'ajụjụ ọnụ na-esochi mgbe ngosi ahụ gosipụtara, Hockenberry jụrụ ma Edward ọ nwere kọntaktị na onye ọrụ igwefoto, Tony, tupu ngosi ahụ. Edward kwetara na Tony na-arụkọ ọrụ n'akụkụ ya na oge ịsepụ iche na ụtụtụ na ha abụọ enweela mkparịta ụka. Agbanyeghị, Edward gọrọ na ya ejirila ozi ọ bụla ọ nwetara n'oge ọ bụla mkparịta ụka a na ịgụ ya (Nickell 2001).
Ọgụgụ oyi, n'aka nke ọzọ, bụ nke mmadụ na-eme ọtụtụ ịkọ nkọ mgbe ọ na-egosi na ọ na-enweta ozi sitere na isi mmalite. Ọ bụ ezie na ịgụ akwụkwọ oyi na-ebutekarị pasent dị ukwuu nke nkwenye na-ezighi ezi, ndị na-akatọ Edward na-ekwu na a na-edezi ihe omume telivishọn ya iji wepụ "ihe ndị ọ na-efu" Na 2001, TIME Magazin bipụtara otu akụkọ na-ekwupụta ahụmịhe otu onye na-ege ntị nwere na eserese nke Ịgafe, nke ọ na-ekwu na usoro ọgụgụ ọgụgụ ọkụ na oyi na-agụ Edward na ndị ọrụ ya. Dabere na ederede ahụ, Michael O'Neill, bụ onye gara mmemme ahụ na-enwe olileanya ịkpọtụrụ nna nna ya, Edward họpụtara oge ịse vidio maka ọgụgụ. Dị ka O'Neill si cheta, ọgụgụ ahụ nwere ọtụtụ ozi na-ezighi ezi nke ederede ole na ole ziri ezi, dị ka aha ndị òtù ezinụlọ. Agbanyeghị, mgbe ngosi a gosipụtara na ọ pụtara, O'Neill chọpụtara na edezigharịla mmemme ahụ nke ọma, na-azọrọ na ewepụla ihe onyonyo ma ọ bụ pịgharịa iji gosi ya na-enye nzaghachi na nkwupụta ndị ọ na-ekwenyeghi. Ọzọkwa, O'Neill kwuru na ya ga-echeta ndị otu ndị ọrụ Edward na-etinye ndị na-ege ntị na mkparịta ụka tupu ngosi ahụ, nweta ozi ejiri mee ihe n'oge ọgụgụ (Jaroff 2001). Ọzọ atụ, Center nke Enquiry director Jim Underdown gara ma dekọọ footage si a filming nke Ịgafe, emesia jiri ya tunyere usoro ihe omume nke egosiri. Underdown kwubiri na ihe ngosi ahụ emeela ọtụtụ ndezi iji mesie ọgụgụ ọgụgụ na-aga nke ọma ike. Otú ọ dị, Underdown kwukwara na ọ hụbeghị ihe ịrịba ama ọ bụla nke ịgụ ọkụ na-eme n'oge niile eserese (N'okpuru 2003). Na nzaghachi maka ebubo ndị a, Edward kwusiri ike na ebe a na-egbutu ihe nkiri eserese site na ịse ihe mmemme ya nke ukwuu, edeziri ya maka oge, ọ bụghị afọ ojuju (Nickell 2001; Endersby 2002). Ọzọkwa, Edward na-ekwusi ike na njehie na nkwukọrịta bụ akụkụ ebumpụta ụwa na usoro ọgụgụ ọgụgụ nke usoro ọgụgụ. N'izo aka ụzọ dị iche iche esi agwa mmadụ okwu n'ime ụwa na nke mmụọ, Edward kwuru na "ọ bụghị asụsụ mkparịta ụka, n'agbanyeghị na ọtụtụ kwenyere na ọ bụ… Ihe m na-eme n'ezie bụ ịnapụta na ịkọwa ihe atụ dị ka m nwere ike iso ọ ”(Edward 1998). Edward na-ekwukwa na ọtụtụ oge ozi ndị na - egosi na ọ "na-efu" n'oge a na-agụ ya bụ eziokwu na ndị nwere isi, mana onye ahụ na-anọdụ ala amataghị njikọ ahụ ozugbo ma ọ bụ ihe omume na-eweta njikọ ahụ emebeghị. N'ihi nke a, Edward na-adụ ọdụ na ndị ya na ha na-agụ akwụkwọ na-abịa njikere ịdekọ ozi a gwara ha n'oge nnọkọ ahụ ("About the Show" nd).
Na mgbakwunye na nkatọ banyere izi ezi ya dị ka onye na-ajụ ase, Edward echewokwa ihu nyocha metụtara nchegbu metụtara ụkpụrụ ọrụ ya. Edward bụ isiokwu nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-adịghị mma na 2001 na-esote ọkwa na Ịgafe mere atụmatụ igosipụta ihe ngosi pụrụ iche nke Edward na-akpọtụrụ ndị mwakpo wakporo Septemba 11, 2001 na World Trade Center. Dị ka otu ọnụ na-ekwuchitere ihe nkiri ahụ si kwuo, pụrụ iche amalitela ịmalite ịdị na-eso usoro oku ekwentị sitere n'aka ndị ezinụlọ na-eru uju nke ndị ahụ metụtara. Agbanyeghị, tupu emechaa ihe nkiri ahụ, ndị nnọchi anya Edward na ụlọ ọrụ telivishọn na-anabata ndị pụrụ iche juputara na oku, na-akpọ usoro ihe omume na-abịanụ ihe arụ na irigbu ọdachi ahụ. Ọ bụ ezie na ndị na-emepụta ihe nkiri ahụ gosiri na ha bu n’uche ịnọgide na-ese fim, a mechara hapụ ọrụ ahụ. Nkwupụta gọọmentị kwuru na ndị ezinụlọ nke ndị ahụ metụtara ga-arịọ ka Edward gụọ ya na agaghị agagharị na ya Ịgafe (de Moraes 2001).
Ndị ọzọ na-akatọ Edward ebubo ọrụ ya ịbụ onye na-erigbu ndị mmadụ na-eru uju n'onwe ya, na-azọrọ na ọnụ ọgụgụ nke usoro ọgụgụ na ihe omume ya dị oke elu ma na-ama Edward aka iji gosipụta na nkwukọrịta na onye ahụ nwụrụ anwụ ga-ekwe omume. Ọ bụ ezie na Edward kwetara na ọnụahịa nke ọrụ ya nwere ike ịbụ "ihe a na-amachibidoro ọtụtụ," ọ na-ekwusi ike na ego dị ugbu a dị mkpa iji kwado ihe omume na ilekọta ndị ọrụ ya. Ọzọkwa, ọ na-azọrọ na site na ya evolve forum, ọ chọọ ime ka ọrụ ya gbasaa karịa-("Akwụkwọ Ozi Si John" nd). Edward, n'ime oge ọrụ ya, nakweere iwu siri ike na-azaghị nyocha. O kwuwo na ịnweta ihe akaebe nke ịkpọtụrụ mpaghara ime mmụọ agaghị ekwe omume, kama ọ dabere kpamkpam na nkwenye (Nickell 2001). Ọzọkwa, Edward akọwaala nguzo ya doro anya iji nwalee ikike ya megide ndị nkatọ na ndị nwere obi abụọ, na-ekwu na "ozugbo ị ga-agbachitere ihe, mgbe ahụ ị na-ekweta na ihe chọrọ nchekwa" (Edward 2009).
"Akwụkwọ Ozi Si John." nd JohnEdward.net . Nweta site na http://johnedward.net/private-readings on 17 March 2014 .
“Banyere John.” nd SciFi.com. Nweta site na http://web.archive.org/web/20060902223803/http://www.scifi.com/johnedward/aboutjohn/ na 17 March 2014.
“Banyere Ihe Ngosi.” nd SciFi.com. Nweta site na http://web.archive.org/web/20060828223554/http:// www.scifi.com/johnedward/abouttheshow/ na 17 March 2014.
“Institutelọ Ọrụ Astrological.” nd Nweta site na http://www.astrologicalinstitute.com/ na 17 March 2014.
de Moraes, Lisa. 2001. "Ọkara obe The Line: WTC nke Mkpọ Mkpọ." The Washington Post. Nweta site na http://www.washingtonpost.com/ac2/wpdyn?pagename=article&node=&contentId = A53372-2001Oct25 na 17 Maachị 2014.
Edward, John. 2001. Gafe: Akụkọ ndị dị n'azụ akụkọ ahụ. San Diego: odtù Jodere.
Edward, John. 1998. Oge Ikpeazụ. New York: Akwụkwọ Berkley.
Edward, John. 1998. "Ajụjụ ọnụ nke Larry King." Larry King Na-adị Ndụ, CNN, June 19. Nweta site na http://web.archive.org/web/20030220161519/http://www.nytix.com/TVShows/NewYork/JohnEdward/transcripts/ na 17 March 2014.
Edward, John. "Ajụjụ ọnụ nke Larry King." 2003. Larry King Live, CNN, October 2. Nweta site na http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0310/02/lkl.00.html na 17 March 2014.
Edward, John. 2009. "Ajụjụ ọnụ nke Sean Hannity." Fox News, June 16. Nweta site na http://www.foxnews.com/story/2009/06/17/medium-john-edward-explains-ability/ na 17 March 2014.
Endersby, Andrew. 2002. "Talkgwa John Edward Bad." Nkwupụta Egwu. Nweta site na http://web.archive.org/web/20070103100811/http://www.skepticreport.com/psychicpowers/jeblues.htm on 17 March 2014 .
"Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị," nd JohnEdward.net. Nweta site na http://johnedward.net/help na 17 March 2014.
Gliatto, Tom. 2002. "Ọkara obere." Ndị mmadụ.com. Nweta site na http://www.people.com/people/article/0,,20136921,00.html na 17 March 2014.
Hallowell, Billy. 2013. "Eluigwe, Hel na isoro ndị nwụrụ anwụ kwurịta okwu: Psychic John Edward kọwara na ịchọpụta ikike ya na mmụọ ya 'Mafia'." The ọkụ. Nweta site na http://www.theblaze.com/stories/2013/05/06/famed-psychic-john-edward-tells-theblaze-about-connecting-with-the-dead-seeing-the-future-and-his-views-on-god/ na 17 March 2014.
Hodges, Stan H. na Jason S. Ulsperger. 2005. "Ihe ngosi nke Paranormal: Mmetụta Nlekọta Atụmatụ na Ahụmịhe nke Usoro nke Psychics na Mediums Mmụọ." Nchoputa efu na Creative Sociology. Nweta site na ojs.library.okstate.edu/osu/index.php/FICS/article/view/1543/1374‎ na 17 March 2014.
Holzer, Alexandra. 2014. "Ise bụ nọmba anwansi: Na-emetụta Onye Ọrịa Na-ahụ Maka Ọrịa John Edward." OmTimes.com . Nweta site na http://community.omtimes.com/profiles/blogs/five-is-the-magic-number-evolve-with-famed-psychic-medium-john na 17 March 2014
Jaroff, Leon. 2001. “Ikwu okwu na ndi nwuru anwu.” TIME.com. Nweta site na http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,100555,00.html#ixzz2u5p1Pdix na 17 March 2014.
Logan, Michael. 2006. "John Edward Bụ Otu Isi Ọrịa." Nduzi TV. Nweta site na http://www.tvguide.com/news/John-Edward-Psyched-41139.aspx on 17 March 2014 .
Nickell, Joe. 2001. “John Edward: Na-eme ka ndị mmadụ nwụnahụrụ.” CSICOP.org. Nweta site na http://www.csicop.org/si/show/john_edward_hustling_the_bereaved/ na 17 March 2014.
Obinna Okeke , Allen. 2014. “Akwụkwọ: Ọkara nwere ozi.” Sacramento Bee. Nweta site na http://www.sacbee.com/2014/01/12/6060147/books-the-medium-has-a-message.html on 17 March 2014.
“Ọgụgụ Onwe Onye.” nd JohnEdward.net. Nweta site na http://johnedward.net/events/descriptions/private-reading on 17 March 2014.
“Ìgwè Ndị Ọgụgụ Onwe Ha.” nd JohnEdward.net. Nweta site na http://johnedward.net/events/descriptions/private-reading-group on 17 March 2014.
“Obere, Akpachi Anya na Otu Ọgụgụ.” nd JohnEdward.net. Nweta site na http://johnedward.net/events/descriptions/small-group on 17 March 2014.
N'okpuru, Jim. 2003. "Ha Na - ahụ Ndị Nwụrụ Anwụ - Ka Ha Na - Eme Ya?: Nchọpụta nke Mediums Television." CSICOP.org. Nweta site na http://www.csicop.org/si/show/they_see_dead_people_-_or_do_they_an_investigation_of_television_mediums/ na 17 March 2014.
"VIP Ihe" nd JohnEdward.net . Nweta site na http://johnedward.net/vip-events on 17 March 2014 .
Walker, James K. 2003. “John Edward.” Mmekọrịta Ndị Nche. Nweta site na http://www.watchman.org/profiles/pdf/johnedwardprofile.pdf on 17 March 2014.
“Gịnị Na-akpata?” nd JohnEdward.net. Nweta site na http://johnedward.net/evolve na 17 March 2014.
"John Edward, Onye Ọkara Adịghị Uche?" nd JohnEdward.net. Nweta site na http://johnedward.net/about on 17 March 2014 .